Leo Messi Oo Si Cajiib Ah Uga Jawaabay Hadii Uu Yahay Daneyste Marka Garoonka Lagu Jiro %
Lionel Messi, ayaa wuxuu sheegayaa inuu hadda uu yahay yahay mid qaab ciyaareedkiisa uu ka fiican yahay sidii uu horey u ahaa uuna kooxdiisa wax badan usameeyo, taasoo ay ugu horeyso dhalinta goolal iyo waliba caawin sameynte.
Sidoo kale, xidiga Barcelona, oo wareysi kooban siiyay Muuq-baahiyaha caanka ah ee lagu magacaabo America TV, ayaa wuxuu beeniyey inuu dantiisa eego marka uu garoonka ku jiro, uuna yahay mid udheela si uu kubada ula qeybsado saaxiibadiisa.
“Ka hor inta aan Banooniga helin waxaan ahaa mid isaga uu leeyahay kulanka,” ayuu kabtanka qaranka Argentina hadalkiisa ku bilaabay.
“Hadda, waxaan isku deyaa inaan la dheeli kooxda – Taasina waa waxa ay kubada ii siineyso aniga wax badan, marnaba iskuma deyi waxyaabo dheeri ah.
“Aas-aas ahaan aniga ma ahan mid daneyste ah, waxaan isku deyaa inaan kubadaha kasoo dhiso goobo kala duwan oo garoonka ah.
“Waxaan sii wadi doonaa sameynta waxyaabahaan oo kale iyo sidii aan horey u ahaa, laakiin ma jiri doonaa waxyaabo ka duwan,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay ku guuleystay xidiga aduunka ugu fiican Shanta jeer.